Radius nke ụwa: ihe ọ bụ na etu esi gbakọọ ya na nke izizi | Network Meteorology
Kemgbe ụwa, ụmụ mmadụ na-achọkarị ịmata ihe. Ọ na-anwa mgbe niile ịlele ma mara ogologo na ịdị ukwuu nke ihe iji mụtakwuo banyere ụwa anyị. Otu n'ime akụkụ nke ụmụ mmadụ amachaghị bụ radius nke Earthwa. Ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịkpọpu akụkụ ala ma mee njem ruo n'isi, anyị aghaghị ịmụ atụmatụ na ịgbakọ okirikiri nke mbara ala a. N'ihi ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị mepụtara ihe atụ iji nwee ike ịlele ogologo a, ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta nke ọma na nke ziri ezi.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe radius nke ụwa bụ na etu esi tụọ ya.
1 Nsogbu banyere radius nke ụwa
2 Igwe tectonics plate na Eratosthenes
3 Eratosthenes usoro iji tụọ okirikiri nke Earthwa
Nsogbu banyere radius nke ụwa
Dị ka anyị maara, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nkà na ụzụ enwewo ọganihu buru ibu, ụwa anyị ka nwere ọtụtụ ihe a na-amaghị. E nwere ọtụtụ mpaghara ụwa nke mmadụ na-agaghị enweta. Ihe atụ bụ mmiri mmiri. Enweghi teknụzụ nke nwere ike imeri nrụgide nke mmiri na ntakịrị ntakịrị ìhè anyanwụ nke a na-ahụ n'olulu mmiri. Otú ahụ ka ọ dịkwa n'etiti ụwa. Akọwaala ọtụtụ akwụkwọ akụkọ banyere njem ruo etiti ụwa mana ọ bụ ihe na-agabigaghị anyị. Kacha m maara enwewo ike igwupụta ihe omimi kemgbe ihe dịka kilomita iri na abụọ. Nke a na - eweli akpụkpọ ahụ apụl apụl.
Ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume igwupụta ruo mgbe ọ ruru ụwa, a ghaghị ịchọta ụzọ dị iche iche iji tụọ radius nke ụwa. Otu n’ime isi ihe na - adabaghị adaba n’enweghị ike igwu ala rue n’etiti ụwa bụ akwa dị elu nke nkume ndị siri ike ma sie ike. Teknụzụ dị elu enweghị ike igwu ala kilomita ndị a nile nke okwute miri emi. Ihe ndọghachi azụ ọzọ bụ ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa bụ isi na ya. Ma ọ bụ na isi ime bụ okpomọkụ nke ihe dị ka 5000 Celsius. N'ịbụ onye nwere okpomọkụ dị otú ahụ, ọ dịghị mmadụ ma ọ bụ igwe ọ bụla nwere ike iguzogide ọnọdụ ndị a. N'ikpeazụ, na omimi ndị a ọbụghị oxygen nke a pụrụ iku ume.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na enwere nsogbu ndị a niile iji nwee ike ịlele radius nke ụwa ozugbo, mmadụ akwụsịla. Achọpụtala ụdị dị iche iche iji chọpụta uru ọ bara. Iji maa atụ, enwere ike iji ebili mmiri na-amụrụ ihe mejupụtara ụwa. Methodszọ ndị a nwere ike ịmata omimi ala ọma jijiji na-eme n'ụzọ na-enweghị isi. Anyị nwere ike ịmata akụkụ dị iche iche nke ụwa n’enweghị iji anya anyị hụ ihe niile.
Igwe tectonics plate na Eratosthenes
Ozizi efere tectonics enyerela ọtụtụ aka ịghọta etu mbara ụwa si arụ ọrụ. A na-ekwu na e kere eke jikọrọ ọnụ na teknụzụ dị iche iche na-aga n'ihu. Ihe kpatara nke nchupu bu n'ihi convection ugbu a nke uwe elu ụwa. Nke a mmegharị efere mara site na aha kọntinent agịga.
A na-enye ihe ntụgharị nke uwe elu ụwa site na ọdịiche dị na njupụta dị n'etiti ihe ndị dị n'ime. Ihe a niile anyị nwere ike ịmata ekele maka ụdị ụzọ ntụgharị na-enweghị isi. Anyị na-achọ ụzọ dị iche iche iji nwee ike ịchọta nha maka ihe niile. Onye sayensị mbụ nwere ike ịlele radius nke ụwa bụ Eratosthenes. Measuredị a ka ndị mmadụ na-enyo enyo kemgbe oge ochie.
N'oge ahụ enweghi teknụzụ dị ukwuu iji nwee ike ịlele radius nke ụwa. Ya mere, usoro mbu a nwere ụfọdụ ihe siri ike nghọta. Buru n'uche na, site n'oge a, a na-ahụta usoro ndị a dị ka teknụzụ mgbanwe. Otu n'ime ihe kachasị mkpa e ji tụọ radius nke ụwa bụ mkpa nke Oge Ezumike.
Eratosthenes wepụtara akwụkwọ papaịrọs site n'ọbá akwụkwọ ma mgbe ọ hụrụ na ọkwa dị na ya anaghị egosipụta ụdị onyinyo ọ bụla, ọ bụ n'ihi n'eziokwu na ụzarị anyanwụ na-ada n'elu ụwa n'ụzọ zuru oke. Nke a bụ ihe kpatara Eratosthenes ọ chọsiri ike ịmata ihe okirikiri nke waswa. Tozọ tụọ radius nke ụwa bụ mgbe ọ gara Alexandria. N'ebe a, m ga-emeghachi nnwale ahụ ma hụ na onyinyo anyanwụ dị ogo 7. Mgbe ọ nwụsịrị, ọ ghọtara na ọdịiche dị n'etiti onyinyo ọzọ nke bi na Siena bụ ihe kpatara ịmara na ụwa gbara gburugburu ma ghara ịdị larịị dị ka ekwenyere n'oge ahụ.
Eratosthenes usoro iji tụọ okirikiri nke Earthwa
Ozugbo o mechara ọtụtụ nyocha, ọ nwetara ọtụtụ ahụmịhe nke nha ndị a. Site ebe ahụ, ọ bidoro ichepụta echiche ole na ole nyeere aka tụọ radius nke ụwa. Ọtụtụ n'ime usoro ahụ dabere na atụmatụ na mwepu. Isi ego ya dabere n'eziokwu na, ọ bụrụ na ụwa bụ gburugburu ogo 360, otu ụzọ iri ise nke okirikiri ahụ ga-abụ ogo asaa. Akụkụ nke ngụkọta zuru ezu bụ ihe a tụrụ na ndò na Alexandria.
N’ịmara na ụzọ dị n’etiti obodo abụọ ahụ bụ́ Siena na Alexandria dị narị kilomita asatọ, o nwere ike ịchọpụta nke ahụ okirikiri nke waswa bụ 6.371 km. Buru n'uche na, n'oge m na-agbakọ Eratosthenes, ọ dị nnọọ mgbagwoju anya iji nwee ike ịlele nha ahụ. Otú ọ dị, o nyere ọnụ ọgụgụ dị nnọọ nso na ihe a maara taa.
Taa enwere uzo ndi ozo iji tụọ ime nke uwa site na ebili mmiri. Dabere na ihe ejiri mee ya na ebe dị anya site na etiti ala ọma jijiji ahụ, enwere ike ịmata omimi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe radius nke ụwa bụ otu esi tụọ ya maka oge mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okirikiri ụwa
Oké osimiri Bering